रुपन्देहीमा स्तरीय होटलहरु खुल्ने क्रम तीव्र | Mechikali Daily
रुपन्देहीमा स्तरीय होटलहरु खुल्ने क्रम तीव्र
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: २५ पुष २०७५, बुधबार ०१:२१
गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएसँगै आगन्तुकको संख्यामा भारी वृद्धि हुने भएकाले रुपन्देहीमा होटल खुल्ने क्रम तीव्र भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम प्रारम्भ भएदेखि नै यहाँ होटल निर्माणको क्रम बढेको थियो । पछिल्लो समय सुविधा सम्पन्न होटलहरु एकपछि अर्को खुलिरहेका छन् । कतिपय खुल्ने क्रममा रहेका छन् ।
बुटवल, पुस । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सुरु हुने समय नजिकिँदै जाँदा रुपन्देहीमा स्तरीय होटलहरु खुल्ने क्रम तीव्र छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको विमानस्थलबाट आगामी छ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने जनाइएको छ । अहिले विमानस्थल निर्माणको क्रम दु्रत गतिमा अघि बढिरहेको छ ।
काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने भैरहवाको गौतमबुद्ध दोस्रो विमानस्थल बन्दैछ । यसलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रुपमा समेत लिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएसँगै आगन्तुकको संख्यामा भारी वृद्धि हुने भएकाले रुपन्देहीमा होटल खुल्ने क्रम तीव्र भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम प्रारम्भ भएदेखि नै यहाँ होटल निर्माणको क्रम बढेको थियो ।
पछिल्लो समय सुविधा सम्पन्न होटलहरु एकपछि अर्को खुलिरहेका छन् । कतिपय खुल्ने क्रममा रहेका छन् । ‘स्टार लेभल’ को सुविधा प्रदान गर्नेगरी खुलेका होटलहरु बाह्य पर्यटक लक्षित छन् । रुपन्देहीमा एक वर्षको अवधिमा ठूला सुविधा सम्पन्न एक सयभन्दा बढी होटलहरु खुलेको बताइन्छ । ‘एक वर्षमा एक सयजति ठूला होटलहरु रुपन्देहीमा खुलेका छन् । होटल खुल्ने क्रम जारी छ ।’ होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष समुद्र जिसी भन्नुहुन्छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ट्रार्गेट गरेर होटल खुलिरहेका छन् ।’
रुपन्देहीमा साना–ठूला दुई हजारभन्दा बढी होटल तथा रेष्टुरेन्ट रहेको बताइन्छ । त्यसमध्ये संघमा मात्र पन्ध्र सय होटल तथा रेष्टुरेन्ट आबद्ध रहेको अध्यक्ष जिसी बताउनुहुन्छ । संघमा सिद्धार्थनगर तथा लुम्बिनीमा रहेका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु आवद्ध छैनन् ।
यहाँका केही पुराना होटलहरूले पनि लगानी थप गरी स्तरवृद्धि गरेका छन् । नयाँ होटलहरु तिलोत्तमा, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनीमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । बुटवल–बेलहिया सिक्सलेन सडक आसपासमा नयाँ होटलहरु खुल्ने क्रम बढेको छ । योगिकुटी, ड्राइभरटोल, नयाँमिल, मणिग्राम, भलबारी, कोटिहवा, ठुटिपिपललगायतका स्थानमा एकपछि अर्को होटल, पार्टीप्यालेस, सुविधासम्पन्न रेष्टुरेन्ट खुलेका छन् । केही दिनअघि मात्र ड्राइभरटोलमा सेवा प्रारम्भ गरेको होटल टुलिप प्रा. लि. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यदुराज बराल भन्नुहुन्छ,‘परिवर्तित समयको मागअनुसार होटलमा लगानी बढेको देखिन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा हाल भैरहेका होटलले नथेग्ने अनुमान संघका अध्यक्ष जिसीको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले धेरै होटलहरु घाटामै चलेका छन् । विमानस्थल सञ्चालन हुँदा अहिलेका होटलले थेग्ने छैनन् ।’ रुपन्देहीमा निर्माणको क्रममा रहेका विकासका ठूला पूर्वाधारले पनि होटलमा लगानी गर्नेहरुको मनोबल बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय स्थल लुम्बिनीले यहाँको चहलपहल बढाउने र त्यसको सिधा असर होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रमा पर्ने अपेक्षा छ । यस्तै प्रदेशको राजधानीले समेत यहाँ होटलको संभावनालाई थप बढाएको छ ।
रुपन्देहीको ग्रामीण क्षेत्रमा समेत होटल तथा पार्टीप्यालेसहरु खुलिरहेका छन् । यहाँ होटल व्यवसायीहरूले सेवा सुविधाअनुरूप न्यूनतम एक हजारदेखि अधिकतम ६ हजारभन्दा माथिका कोठा उपलब्ध गराएका छन् । लगानी बढेसँगै यहाँका व्यवसायीले बुटवललाई होटल जोनको रूपमा विकास गरी २४ सैं घण्टा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सुरक्षाका कारण अहिले प्रहरी प्रशासनले राति १० बजे बुटवलका होटलहरू बन्द गनुपर्ने नियम बनाएको छ ।